E-News Nepali || Fast and Accuracy » हार्दिक श्रद्धान्जलि ! मध्यबानेश्वरमा ‘गर्ल्स होस्टल’ मा २२ वर्षीया सोसिकाकाे शंकास्पद मृ’त्यु
हार्दिक श्रद्धान्जलि ! मध्यबानेश्वरमा ‘गर्ल्स होस्टल’ मा २२ वर्षीया सोसिकाकाे शंकास्पद मृ’त्यु
मध्यबानेश्वरमा रहेको ‘द रोमिज गर्ल्स होस्टल’ मा २२ वर्षीया सोसिका शेर्पाको शं’कास्पद मृ’त्यु भएको छ। होस्टलको ला’परबाहीका कारण स्‍नातक पहिलाे वर्षमा अध्ययनरत ताप्लेजुङ मैवाखोला- ४ की २२ वर्षीया शेर्पाकाे मृ’त्यु भएको परिवारको आ’रोप छ। पुस २२ मा दिउँसो बाथरूममा नु’हाउन छि’रेकी सोसिका अ’चेत अवस्थामा भेटिएको होस्टलमा रहेका उनका साथीहरूबाट बु’झिएको छ। बाथरुम छिरेकी उनी ३ घण्टासम्म बाहिर न’आउँदासमेत होस्टलले वा’स्ता नगरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
होस्टलमा न त वा’र्डेन न त सु’रक्षा गा’र्ड। सामान्य मा’पदण्डसमेत पूरा नगरेको मध्यबानेश्वरमा रहेको द रोमिज गर्ल्स होस्टेलमा ३० जना छात्रा राखेर सञ्चालन गर्दै आएको पाइयो। होस्टलले पूरा गर्नुपर्ने मा’पदण्ड कुनै पनि नभएको भन्दै आफ्नो छोरीले अ’कालमै ज्या’न गु’माउनु परेको सोसिकाका बुबा फुर्वा शेर्पाको आ’रोप छ।
ग्यास गिजर प्रयोग गर्दा अक्सिजन अ’भावका कारण नि’सासिएर उनकाे मृ’त्यु भएकाे हुनसक्ने प्रा’रम्भिक अनुमान छ। होस्टलको ला’परबाहीकै कारण मृ’त्यु भएको मृ’तकका काका संगम शेर्पाले दा’बी गर्दै सञ्चालकलाई कार’बाही गर्न माग गरे। सञ्चालक सीमा न्यौपानेले मा’पदण्ड पूरा नगरी ३० जना छात्रा राखेर सञ्चालन गरेको पाइएपनि प्रहरीले कुनै चासो नदेखाएको परिवारको आ’रोप छ।
मृ’तक शेर्पाको पो’ष्टमार्टेमपछि शनिबार दा’हसंस्कार गरिएको छ। तर, होस्टल सन्चालिका सोसिकाको दा’हसंस्कारमा नआएको र सं’वेदनशीलता नदेखाएको भन्दै का’रबाही गर्न माग गरे। होस्टलको बहानामा काठमाडौंमा छ्या’प्छ्याप्ती खुलेका न’क्कली होस्टलमाथि त’त्काल नि’यमन गरी का’रबाही गर्नुपर्ने माग परिवारकाे छ।
प्रकाशित मिति २८ पुष २०७६, सोमबार १४:४०